Uzo asaa iji bulie oru ntughari ahia gi na ntaneti | Martech Zone
Ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-echegbubiga onwe ha ókè banyere ụba okporo ụzọ na saịtị ha kama ịtụgharị okporo ụzọ ha nwere. Ndị ọbịa na-abịa na saịtị gị kwa ụbọchị. Ha maara gị na ngwaahịa, ha nwere mmefu ego, na ha dị njikere ịzụta… ma ị na-agaghị na-arafu ha na àjà ha mkpa iji tọghata.
Na ntuziaka a, Brian Downard nke Eliv8 na-egosi gị kwụpụ otu ị ga - esi wuo olulu azụmaahịa na - akpaghị aka nke ị nwere ike iji bulie ikike azụmaahịa gị site na iji usoro usoro 7 dị mfe.
Ngwaahịa / Ahịa Fit - Gbaa mbọ hụ na ngwaahịa ị na-ere dabara na ndị na-ege gị ntị ị na-adọta.
Họrọ Isi mmalite okporo ụzọ gị - Chọpụta ụzọ kachasị mma nke okporo ụzọ ma chụpụ ahịa karịa site na isi mmalite ndị ahụ.
Ngwá isi - Nye onyinye a na-apụghị ịgbagha agbagha na ị nwere ike inye onye ahịa gị n'efu na mgbanwe maka ozi kọntaktị ha.
Njem waya - Nye onyinye a na-apụghị ịgbagha agbagha, obere tiketi dị ala (nke dịkarịsịrị $ 1 ​​na $ 20) nke ejiri iji tọghata ndị ahịa.
Isi Nye - Ugbu a ị nwetarala ntughari, bulie elu ma nye Ngwaahịa ma ọ bụ Ọrụ Isi.
Ikike kachasị mma - enye a ùkwù na ngwugwu dị elu na ala n'akụkụ peeji ọnụ.
Returnzọ nlọghachi - weta ndị na-azụ ahịa nke na-anaghị azụghachi n'ime olulu gị site na ịmebe isi ihe metụrụ ha na ịntanetị.
Tags: Brian Downardnjikarịcha ntụgharịisi na-enyeELIV8mụbaa mgbanwendu magnetahia ahiaọfụzụ ahịangwaahịa kwesịrị ekwesịngwaahịa ahịauru maximizerlaghachi ụzọokporo ụzọnjem waya